विश्व प्रकाश शर्मा बने हिरो : न कुनै गुट न कुनै बलियो प्यानल तरपनी जितेरै छाडे - Umanga Khabar::Umanga Khabar Nepali News Portal
विश्व प्रकाश शर्मा बने हिरो : न कुनै गुट न कुनै बलियो प्यानल तरपनी जितेरै छाडे
१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो जित कांग्रेसलाई रुपान्तरित गर्ने यात्राको प्रारम्भ भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा गगनकुमार थापासँगै शर्मा निर्वाचित भएका छन् । जितपछि पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो एउटा व्यक्तिको विजय पनि होइन, गुटको विजय पनि होइन । सिंगो नेपाली कांग्रेसलाई रुपान्तरित गर्ने, नयाँ ढंगले सुरुवात गर्ने यात्राको प्रारम्भ हो ।’
उनले अघि भने, ‘फरक फरक विचार समूहमा रहेका सबै साथीहरुको मत प्राप्त गरेर जित्नु भनेको सिंगो कांग्रेसलाई सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भने जस्तै भावनामा गाँस्नु हो ।’
नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता भएर काम गर्दा चर्चित युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको छवि देशभर परिचित भएको थियो । तर १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्यानलको हिसाबकिताब गर्दा शर्मा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा महामन्त्रीमा अटाएनन् ।
सभापति देउवाले शर्मालाई सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवार बनाउने वाचा दिए तर शर्माले मानेनन् ।
देउवाको प्यानलबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार हुनु चुनावी रूपमा सुरक्षित रहेपनि शर्माले साहसिक निर्णय लिए । एकातिर देउवा टीमबाहेक उम्मेदवारी दिए भने अर्काेतिर महामन्त्री पदकै लागि मैदानमा उत्रिए ।
काठमाडौंको सुन्दरीजलमा वृक्षरोपण गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेका शर्मा अन्ततः कांग्रेस महामन्त्री बनेरै छाडेका छन् । यससँगै शर्माको राजनीतिक उचाइ चुलिएको छ ।
सभापति देउवा टीममै रहेर सुरक्षित बाटो हिँड्दै सहमहामन्त्रीकै चित्त बुझाएको भए विश्वप्रकाश धेरै सहमहामन्त्रीबीच गुमनाम हुनसक्थे तर उनले उठाएको जोखिमले शर्मालाई राजनीतिक लाभ दिएको छ ।
महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा पुराना राजनीतिक खेलाडी डा. प्रकाशशरण महत र डा. मिनेन्द्र रिजाल तथा युवा नेता प्रदीप पौडेललाई हराउँदै विश्वप्रकाश र गगनकुमार थापा कांग्रेसमा उदाएका छन् ।
गगन थापा १३औं महाधिवेशनमा समेत महामन्त्री पदका उम्मेदवार थिए तर विश्वप्रकाश पहिलो प्रयासमा महामन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
आकर्षक र लोकप्रिय नारा, योजना, कार्यक्रम, भाषण गर्दै आएको गगन र विश्वको जोडीले अब कांग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? भविष्यमा देखिने छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा हालसम्म कांग्रेस सभापति र उपसभापतिको मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा तथा उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन् ।